Ixabiso lequmrhu | IQELA LECHUNKAI
Injongo yeshishini: ukujolisa kwinkonzo, umthengi kuqala
Inkonzo ejolise kumthengi, kuqala.
Soloko ubeka abathengi kuqala.
Misela umxholo "wokwandiswa kokwanelisa abathengi".
Cinga ngokwembono yabathengi, cebisa umgangatho ongcono, uzinzo kwaye uphuhle umgca wemveliso kubathengi.
Ukuyekelela kwaye sincame inzuzo yethu ukuze kuqinisekiswe ukwenziwa kweenzuzo zabathengi.
Umsebenzi woShishino: Amashishini ePhambili weSisombululo sePakethe seHlabathi
Ngophuhliso lweshishini lenkampani, inkampani itshintshe ngempumelelo ukusuka kwimodeli enye ekwi-intanethi yaya kwi-intanethi nakwi-intanethi imodeli edityanisiweyo, ke ukuba yinkampani yokuqala yokupakisha e-China e-China ayisakwazi ukuhlangabezana neemfuno zenkampani yangoku, kwaye iba yipakethe ephezulu yehlabathi. Isisombululo seshishini siyeyona nto iphambili ngaphandle kwe China, kwihlabathi.
Yiba nombulelo ekhaya, uvuze uluntu, uqhubeke ukukhuthaza uphuhliso olusempilweni kwindalo eluhlaza
Idolophu yasekhaya yeyona ndawo ithambileyo, ibizwa ngokuba "ngumthombo wamanzi", nangona siphila ubomi bemihla ngemihla kwaye sisebenza sixakekile, kodwa asilibali idolophu yabo. Inyaniso "yokwazi ubabalo" isuka entliziyweni, iyangena Igazi lomntu, luhlobo lokuthululwa kwendalo kunye nendalo. Ukonwaba kunokufikelelwa kuphela ngokufumana amava kunye nokujonga ubuhle bobomi kunye nokufumana amava emvakalelo. Ubomi bufana nohambo, kwaye ekuhambeni, sihlala sisuka kwenye indawo ukuya kwenye indawo, kwaye sisibonelela ngayo yonke into, luluntu.
Sizimisele ekusebenziseni ngakumbi okusingqongileyo, okukhuselekileyo, ukuthotywa kunye neemveliso ezisemgangathweni ezisemgangathweni ukubonelela abathengi ngokusebenzisana kunye nenkonzo yexesha elide. Ngokuqonda ukupakisha okuluhlaza, sikhetha izinto ezifanelekileyo ngakumbi zotshintsho lobume behlabathi kwaye senza igalelo eliphantsi kuphuhliso olusempilweni lomhlaba.
Umsebenzi onyanisekileyo, ukuthembeka, ukusebenza nzima, ukufunda kunye nokuyila
Abantu abangenantembelo nabangasekelwanga, amashishini ngaphandle kokuthembela akazukufikelela.Ukunyaniseka, kukuziphatha, luxanduva, kukuziphatha ngakumbi, ukuthembeka kukuziphatha kwethu okuhle, thina bantu basechunkai bahlala befana, bethembekile kwaye bagcina isithembiso Inkampani ifuna wonke umsebenzi ukuba anyaniseke kwaye athembeke.Ukunyaniseka yindlela yethu yokuziphatha yabantu, indlela yabantu yokwenza izinto. Umsebenzi onzima luhlobo lomoya wokushishina, oko kukuthi, kumzabalazo wobunzima kunye nobunzima, yenza inkqubela phambili, uqhubele phambili, ushishino olunzima. Umsebenzi onzima kukuzinikezela, oko kukuthi, ukuze inkampani ikulungele ukunikela. yindoda ehlala iqhubeka nomsebenzi wakhe kwasekuqaleni. Kuya kufuneka sigcine umoya wokufunda kunye nezinto ezintsha, singazoli kwimeko yethu yangoku, sicinge kwikamva, sigcine inkqubela phambili yonke imihla, kuphuhliso oluzinzileyo lweshishini eligciniweyo lokulwa ukusebenza.